News - Waa dalagyadii oo dhan, illaa hoos
Dalagyo badan oo cusub usbuucan, qaar badan oo ka mid ahina waa kugu cusub yihiin, markaa sharraxaad yar ayaa laga yaabaa inay fikrad fiican tahay:
Tufaaxa marwada cas waxay leedahay hilib dhadhan fiican leh, dhadhanka ayaa i xasuusinaya tufaaxa ugu wanaagsan ee bislaaday ee aad waligaa cunay iyadoo leh uun sharoobo maple ah.
Tufaax Fuji, sidoo kale loo yaqaan tufaax cas, waa tufaax wareegsan, oo dahab ah oo u eg qaab tufaax ah. Waxay ka macaan yihiin tufaax marwada casaanka ah, oo leh darbiyo xoogaa khafiif ah. Waxaan u jecel nahay kuwan macaanka iyo rootida.
Waxaan ku kornay tufaaxa Gala dalab joogto ah oo soo dejiyayaasha joogtada ah ee dibada. Kuwani waa noocyo yar oo tufaax ah oo u eg sida tooshka u ifaya nalalka wareega, ma laha wax dheeraad ah oo lagu daro, laakiin dhadhan badan. Dhaqan ahaan waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo suxuunta saladhka Caribbean-ka, isku dar ah oo dhadhan ah oo kedar tufaax ah, basbaas, basal, iyo toon, taas oo loo isticmaalo in lagu dhadhamiyo wax kasta oo ka yimaada bariiska iyo digirta, hilibka, ama khudaarta.
Ka dib markaan kala soocno dhammaan basashayada keydsan, waxaan sidoo kale haysannaa dhowr kiis oo ah cunug yar oo basal macaan ah, oo qiyaastiisu le'eg tahay basasha luul. Kuwani waxay ku fiicnaan lahaayeen dhagxaanta loogu talagalay kaboolada la dubay, lagu tuurayo dhammaanteed, ama hoos loo jajabinayo sida loogu talagalay dhammaan taageerayaasha basasha nala wadaagga.
Taasi waa hoos-u-dhaca dalagyada 'la yaabka leh' ee hadda. Weli waxaan haysannaa toon joogto ah, sinjibiil, tufaax cusub, iyo basasha haddii taasi ay tahay doorbidkaaga, waxaad xor u tahay inaad timaaddo fiiri sawiradayada beeraha ee ku yaal degelkeenna, oo raac xiriirka hoose www.primeagr.com. [sawirada beeraha halkan ku dheji]
Xusuus-qorkii ugu dambeeyay, waxaan u baahanahay inaan soo qaadno oo xirxirno sida ugu horreysa maalmaha ugu macquulsan si aan u hubinno in khudaartaadu ay uga soo baxayso ciidda cusub si ay u ilaaliso tayada wanaagsan. Kuwa idinka mid ah ee door bida inaad horay u sii sameysid amarro, waad nagu caawin kartaa inaan ka soo baxno adoo amarradaada ku helaya waxoogaa ka horreeya sidii caadiga ahayd, marka waan ognahay waxa aan u baahan nahay inaan gacanta kuugu hayno. Waxaan jecel nahay shimbiraha hore!
Waad ku mahadsan tahay had iyo jeer ganacsigaaga, oo waxaad leedahay toddobaad wanaagsan!
Waqtiga boostada: Nofeembar-25-2020